एप्पल आईप्याड प्रो: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र रिलिज | ग्याजेट समाचार
यी नयाँ आईप्याड प्रो २०१ are हुन्
ईडर एस्टेबान | | एप्पल, ट्याब्लेटको
एप्पलले आज, अक्टोबर 30०, न्यु योर्कमा एक नयाँ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, जसमा उनीहरूले नवीनताहरूको श्रृंखला प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा प्रस्तुत गरिएको एक उत्पाद, र प्रयोगकर्ताहरू द्वारा अत्यधिक प्रत्याशित, नयाँ आईप्याड प्रो २०१ are हो। भर्खरका हप्ताहरूमा टिप्पणी गरिएको रूपमा, हामी कपर्टिनो कम्पनीको पक्षमा उल्लेखनीय परिवर्तनको सामना गरिरहेका छौं।
आईप्याड प्रो २०१ for को लागि नयाँ डिजाइन प्रस्तुत गरिएको छ, सुधारको श्रृंखला को समावेशीकरणको साथसाथै, सबै तहमा। ताकि हामी एप्पलले प्रस्तुत गरेको सबैभन्दा पूरा मोडेल फेला पार्दछौं। यसको बारेमा अधिक पत्ता लगाउन तयार हुनुहुन्छ?
नयाँ डिजाइन, जसले सकारात्मक टिप्पणीहरू उत्पन्न गर्दछ र ठूलो शक्ति दुई पक्षहरू हुन् जुन यस नयाँ पुस्तालाई सर्वश्रेष्ठ परिभाषित गर्दछन्। कम्पनीले दावी गरे अनुसार परिवर्तनको एक पुस्ता। र त्यो हो पहिलो मोडेल प्रस्तुत भएपछि यो सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो तीन वर्ष पहिले।
1 नयाँ डिजाइन
2 प्रोसेसर र भण्डारण
3 एप्पल पेन्सिल र स्मार्ट कीबोर्ड फोलियो
4.1 Pro .11 इन्च स्क्रीनको साथ आईप्याड प्रो
4.2 आईप्याड प्रो १२..12,9 इन्च स्क्रीनको साथ
मुख्य नवीनता जुन हामीले यी आईप्याड प्रो २०१ in मा फेला पार्दछौं ती तिनीहरूमा होम बटनको अभाव हो। एक निर्णय जुन एप्पलले आफ्ना आईफोन मोडेलहरूद्वारा बनाएको अनुसरण गर्दछ, त्यसैले यो अनौपचारिक कुरा होईन। यस बटनको अभावले साना फ्रेमहरूको लागि अनुमति दिन्छ, जुन ठूलो स्क्रिनमा अनुवाद गर्दछ। कुन निश्चित रूपमा यसलाई एक उत्तम विकल्प बनाउनमा योगदान पुर्‍याउँछ जब तिनीहरूमा श्रृंखलाहरू वा चलचित्रहरू हेर्नको लागि आउँदछ।
यस नयाँ पुस्तामा दुई आकारहरू परिचित छन्। त्यहाँ ११ इन्च मोडल र १२..11 इन्च साइज छ। त्यसोभए प्रयोगकर्ताहरू आकार छनौट गर्न सक्षम हुनेछन् जुन उनीहरूले सोच्दछन् कि उनीहरूको मामलामा सबैभन्दा सुविधाजनक छ। दुई बीच मात्र भिन्नता आकार हो, विनिर्देशन स्तरमा तिनीहरू समान हुन्।
आईप्याड प्रोले देख्यो कि उनीहरूको फ्रेमहरू घटाइएको छ, विशेष रूपमा माथिल्लो र तल्लो फ्रेमहरूमा यो देखिने छ। तर तिनीहरू फ्रेमहरू छन् जुन पर्याप्त बाक्लो छ तिनीहरूमा अनुहार आईडी सेन्सर राख्न सक्षम हुनुहोस्, यो नयाँ जेनरेशनको स्टार कार्यहरू मध्ये एक। धेरैको राहतको लागि निशानको आवश्यकता बिना नै केहि सम्भव भएको छ। तपाईले देख्नुहुनेछ कि कुनाहरू गोलाकार भएको छ, त्यसैले degree ० डिग्री आकार ड्रप गरिएको छ।
एप्पलले अगाडि पुष्टि गर्दछ कि प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरू आईप्याड प्रोमा तेर्सो वा ठाडो रूपमा फेस आईडी प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन्। जे होस् प्रारम्भिक कन्फिगरेसनमा हामीले यसलाई पोर्ट्रेट मोडमा राख्नुपर्नेछ। एकचोटि हामीले यो गरिसकेपछि, हामी यसलाई दुबै तरीकाले प्रयोग गर्न सक्छौं। के हामीलाई प्रयोगको लागि अधिक विकल्प दिनेछ।
हामी यस आईप्याड प्रोमा तरल रेटिना स्क्रिनको सामना गरिरहेका छौं। एप्पलले अहिले सम्म यस पुस्तासँग OLED मा जम्प बनाएको छैन, तर हामी यस स्क्रिनको लागि LCD भित्र सबै भन्दा राम्रो पाउँछौं। यसले स्क्रिनको लागि आईफोन एक्सआरको टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ, जुन हामीले पहिले उल्लेख गरेका तरल रेटिना स्क्रिन हो। थप रूपमा, हामीसँग प्रोमोशन, फराकिलो र g गमुट र ट्रु टोन टेक्नोलोजीहरू पनि छन्।
प्रोसेसर र भण्डारण
नयाँ डिजाइन र नयाँ प्रोसेसर। एप्पलले तिनीहरूमा A12X बायोनिक परिचय गराउँछ, जुन आईफोनको नयाँ पुस्तासँग एक महिना अघि प्रस्तुत गरिएको प्रोसेसरको संस्करण हो। यो एक प्रोसेसर हो जसले प्रदर्शन र शक्तिमा मात्र होइन विभिन्न सुधारहरू पनि ल्याउन जानेछ। त्यहाँ ग्राफिक्स सुधारहरू पनि छन्।
यो आईफोन n एनएम प्रक्रियामा आधारित छ। यसको सीपीयूमा जम्मा आठ कोरहरू छन्, जबकि जीपीयू, एप्पल आफैले डिजाइन गरेको हो, c कोरहरू छन्। यसमा हामी १०,००० लाख ट्रान्जिस्टरहरू फेला पार्दछौं। न्युरोल इन्जिन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि कपर्टिनो कम्पनीले यस बर्ष आईफोनमा देखेको एउटा परिचय दिन्छ।
यो एक न्यूरल ईन्जिन हो कि tr खरब अपरेशनहरू गर्न सकिनेछ, मेशिन लर्नि withको साथ उपलब्ध छ। अर्को पक्ष जुन अमेरिकी फर्मबाट यी नयाँ आईप्याड प्रोमा सुधार गरिएको छ। भण्डारणको रूपमा, हामी अब फेला पार्न लागेका छौं 1TB सम्म उच्च-स्पीड फ्ल्यास भण्डारण।
एक शक बिना, सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन मध्ये एक यस आईप्याड प्रोमा USB टाइप-सी को परिचय हो। यी हप्ताहरूमा हल्लाहरू थिए कि एप्पलले यो नयाँ पुस्तामा यो परिचय गराउदैछ, त्यसैले यो पहिलो हो। र यो अन्त मा पहिले नै भएको छ। त्यसोभए कम्पनीले अब लाइटनिंगलाई एकातिर राखिरहेको छ। थपको रूपमा, आईफोन USB लाई प्रयोग गरी चार्ज गर्न सकिन्छ लाइटनिंग केबल र K केके सम्मको बाह्य स्क्रिनमा जडित।
एप्पल पेन्सिल र स्मार्ट कीबोर्ड फोलियो
आईप्याड प्रो मात्र नवीकरण गरिएको छैन, यसको सामानहरूले पनि गरेको छ। मुख्य उपकरणको रूपमा, हामी दुबै डिजाइनमा र कार्यहरू स्तरमा यी एप्पल पेन्सिल र स्मार्ट कुञ्जीपाटीमा फेला पार्दछौं। तिनीहरू दुई सामानहरू हुन् जुन लामो समयदेखि उपकरणहरूको यस परिवारसँग आएका छन्, त्यसैले उनीहरूको नवीकरण महत्त्वपूर्ण थियो।
सबै भन्दा पहिले हामी स्मार्ट कुञ्जीपाटी Folio फेला पार्दछ। एप्पलले स्मार्ट कनेक्टर प्रयोग गरेर आईप्याड प्रोमा किबोर्ड पुनःसेट गर्ने निर्णय गरेको छ, धन्यवाद जुन ब्लुटुथ वा एकीकृत ब्याट्री प्रयोग नगरीकन कुञ्जीपाटी प्रयोग गर्न सम्भव हुनेछ। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीलाई तपाईंको बोझ बिर्सन अनुमति दिनेछ।
हामीले तपाईंलाई भनेको छैँ, यसको डिजाईनमा पनि परिवर्तन आएको थियो। यो अवस्था मा, एप्पलले एक स्लिमर किबोर्ड लेआउट प्रस्तुत गर्दछ। थप रूपमा, हामी दुईवटा पर्दा टिल्टन स्थानहरू पाउँछौं। यस तरीकाले, हामी यसलाई डेस्क वा टेबुलमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछौं, तर अर्को स्थितिमा यसलाई गोदमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, यदि हामीले सोफामा वा ओछ्यानमा बसेर यसलाई प्रयोग ग .्यौं भने।
यस आईप्याड प्रो को लागी दोस्रो सहायक एप्पल पेन्सिल हो। कपर्टिनो कम्पनीले यसको पुनः डिजाइन गर्‍यो, यसमा चुम्बक घुसाउँदै, ताकि यो ट्याब्लेटको पालना गर्न सक्षम हुनेछ, तपाईं फोटो मा देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा। जब हामी यो गर्छौं, स्टाइलसले वायरलेस रूपमा चार्ज गर्दछ। त्यसैले अब लोड गर्न धेरै सजिलो छ। नयाँ मोडेलको पनि नयाँ क्षेत्र छ जुन टेसिटाइल छ, जुन हामी प्रयोग गर्न सक्नेछौं गौण कार्यहरू।
सामान्य रूपमा, यी आईप्याड प्रो विभिन्न संस्करणहरूमा जारी हुन्छन्, जुन उनीहरूको आन्तरिक भण्डारणमा निर्भर हुन्छ, साथै तपाईंले वाइफाइको साथ संस्करण चाहानुहुन्छ वा वाइफाइ एलटीईको साथ एक। यसको आधारमा, हामी पर्याप्त व्यापक मूल्य दायरा फेला पार्दछौं। हामी तपाईंलाई नयाँ मूल्यको सबै संस्करणहरू स्पेनमा तिनीहरूको मूल्यहरू देखाउँदछौं।
Pro .11 इन्च स्क्रीनको साथ आईप्याड प्रो
GB 64 जीबी वाइफाइ: 879 XNUMXeयूरो
GB 64 जीबीको साथ वाईफाई - एलटीई: १,० e।
GB 256 जीबी वाइफाइ: 1.049 XNUMXeयूरो
GB 256 जीबीको साथ वाईफाई - एलटीई: १,० e।
GB 512 जीबी वाइफाइ: 1.269 XNUMXeयूरो
वाईफाई - LTE: १512 यूरोको साथ 1.439१२ जीबी
१ टीबी वाई-फाई: १,1०eयुरो
१ TB वाईफाई LTE: १,1eको साथ
आईप्याड प्रो १२..12,9 इन्च स्क्रीनको साथ
GB 64 जीबी वाइफाइ: 1099 XNUMXeयूरो
GB 256 जीबी वाइफाइ: 1.269 XNUMXeयूरो
GB 512 जीबी वाइफाइ: 1.489 XNUMXeयूरो
वाईफाई - LTE: १512 यूरोको साथ 1.659१२ जीबी
एप्पलले पनि सामानको मूल्य प्रकट गरेको छ। किबोर्डको मूल्य ११ इन्च मोडलको लागि १ 199 11 र युरो १२..219 इन्च साइजको २१eयुरो छ। नयाँ एप्पल पेन्सिलको मूल्य १135 यूरो हो.
आईप्याड प्रो का सबै संस्करणहरू अब आधिकारिक रूपमा एप्पल वेबसाइटमा आरक्षित गर्न सकिन्छ। दुई मोडेलको सुरुवात नोभेम्बर on मा हुनेछ स्पेन सहित सारा संसारमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » एप्पल » यी नयाँ आईप्याड प्रो २०१ are हुन्
त्यसैले नयाँ म्याकबुक एयर र म्याक मिनी २०१ are छन्
eSIM: यसका बारे तपाईंलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा